10 mureza mafoni ane akanakisa hupenyu hwebhatiri (Chivabvu 2015)
Kuru Nhau & Ongororo 10 mureza mafoni ane akanakisa bhatiri hupenyu (Chivabvu 2015)
10 mureza mafoni ane akanakisa bhatiri hupenyu (Chivabvu 2015)
Iyo yekumira mafoni mafoni chirimwa cheichi uye mwaka wadarika chakatove chakatovhurwa uye kuverengerwa. Tine mafoni makuru ekutora achiuya kubva kumativi ese - Samsung, Apple, LG, Sony, HTC uye maJuggernauts eChina seHuawei. Ivo vese vanozoita kuti basa riitwe, uyezve nevamwe, saka & maapos arikuomera zvakaoma kusarudza imwe semutyairi wezuva nezuva. Tichifunga izvo zvirinyore kuregedza kune zvakajairika mushandisi musiyano mukugadzirisa simba, screen kana kamera mhando pakati pemireza mazuva ano, isu taida kuzvimisikidza iwo ese neakanyanya kukosha maitiro ayo achiri kuita mutsauko wakakura - hupenyu hwebhatiri - kubatsira iwe kucheka kuburikidza kushambadzira fluff.
Isu tinomhanya mireza yose ichangoburwa kuburikidza neyedu yakaenzana bhatiri bhenji bvunzo yatove, uye, zvinosuwisa, zvakazoitika kuti mwaka uno & apos; chirimwa hachimiriri chero kufambira mberi maererano nehupenyu hwebhatiri uchienzaniswa nemwaka wadarika & apos; s, kana kunyange avo vakavatangira. izvo zvaive kunze kwegore rapfuura panguva ino. Kuwanda kwemasikirwo epamberi eunibody uye Quad HD inoratidzira yakatora muripo wayo pakufambira mberi kwekutsungirira kwebhatiri, saka gore rapfuura & maapos; s champi achiri kutonga akakurisa, zvirinani kusvika tayera izvo zvichaitwa naSony inotevera. Heano gumi eanhasi emireza anoratidzirwa nehupenyu hwavo hwebhatiri - kubva kune iwo aunotora nyore paweekend kure nechaja, uye uchine muto wakasara neMuvhuro, kune iwo achango zviita kuburikidza nezuva.
Hupenyu hwebhatiri(maawa) Yakakwirira iri nani LG G4 6h 6 min(Varombo) HTC Imwe M9 6h 25 min(Varombo) Motorola YAKANYA Turbo 10h 42 min(Zvakanaka) Samsung Galaxy S6 7h 14 min(Avhareji) Sony Xperia Z3 9h 29 min(Kugona) Samsung Galaxy Note4 8h 43 min(Kugona) Xiaomi Mi 4 8h 32 min(Kugona) Huawei P8 7h 12 min(Avhareji) Apple iPhone 6 Uyezve 6h 32 min(Avhareji) Google Nexus 6 7h 53 min(Avhareji)
Kutengesa nguva(maminitsi) Pazasi zviri nani LG G4 127 HTC Imwe M9 106 Motorola YAKANYA Turbo 126 Samsung Galaxy S6 78 Sony Xperia Z3 235 Samsung Galaxy Note4 95 Xiaomi Mi 4 126 Huawei P8 180 Apple iPhone 6 Uyezve 171 Google Nexus 6 98
HTC Imwe M9
Apple iPhone 6 Uyezve
Motorola YAKANYA Turbo
Android lollipop shandura color scheme
Nhare Dzakanakisa muna 2021
Kuedza Pasina QA Resource
Apple inowedzera kutengeserana kwe iPhone mumutengo ne $ 15 pamhando dzakasiyana
Mune yekutanga Verizon vs T-Mobile vs AT & T 5G uye LTE kumhanya bvunzo kwe2020, Ma Bell anoichengeta
Maitiro ekudzima Facebook Messenger ziviso mhere (Android, iOS)